अब राहत वितरण गर्दा फोटो खिच्न नपाइने ! – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ अब राहत वितरण गर्दा फोटो खिच्न नपाइने !
अब राहत वितरण गर्दा फोटो खिच्न नपाइने !
दीप संञ्चार चैत्र २४, २०७६ गते २०:०१ मा प्रकाशित
स्याङ्जा – वालिङ नगरपालिकाले राहत तथा व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेको छ । नगर कार्यपालिका, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले ‘कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) राहत वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६’ निर्माण गरी लागु गरेको हो ।
जसमा राहत तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको कुनै पनि फोटो खिच्ने÷खिचाउने जस्ता कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । संदेनशील घडीमा मानवीय संवेदनलाई मध्येनजर राख्ने भन्दै सो निर्णय गरिएको हो ।